Sawirro:-Gobolka Banaadir oo dib u dhis ku sameynaya Warta Tunbuluq ee Muqdisho – War La Helaa Talo La Helaa
Sawirro:-Gobolka Banaadir oo dib u dhis ku sameynaya Warta Tunbuluq ee Muqdisho
Duqa Muqdisho ahna Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) ayaa daah furay dib-u-dhiska Warta Tunbuluq ee degmada Xamar-Weyne, taasoo aan shaqayn ilaa iyo Dawlad-burburkii.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa sheegay in furitaanka mashruucan dib loogu howlgelinayo warta Tunbuluq uu bilow u yahay qorshe ballaaran oo lagu hagaajinayo dhammaan biyo-mareenada Caasimadda ee xirmay.
Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan waxuu xusay in Wartan ay kaalin wanaagsan ka qaadan jirtay gaarsiinta badda ee biyaha fariista qeybo kamid ah degmooyinka xili roobka.
“Warta Tunbuluq waxay ahayd marin wanaagsan oo biyaha gaarsiiya badda, balse ma shaqayn dhowr iyo labaatankii sanno ee la soo dhaafay, mashruucan aan dib ugu howlgelinaynana waa mid bilow u ah dhismaha guud ahaan kanaaladii biyaha qaadi jiray ee Caasimadda”.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in kaalintooda ay ka qaataan dhismaha iyo horumarka dalkooda, isla markaana loo istaago sidii wadajir loogu dhisi lahaa dalka.
Furitaanka Masharuuca dib loogu dhisayo Warta Tunbuluq ayaa waxaa ka qeyb galay Guddoomiye ku-xigeenka Howllaha guud iyo qaar kamid ah Agaasimeyaasha M/mulka Gobolka Banaadir.
SAWIRO: Wafdi uu hoggaaminaayo Gudoomiye ku xigeenka Aqalka Sare oo Gaalkacyo Gaaray
Sawirro:-Biriq Xoolo ku leysay Galgaduud